I-PHP Mailer ibulala iwebhusayithi nganye ngomzuzu awuyifunde le nqaku «ITS
I-code engabonakaliyo yokusebenza okungekho ukukhuseleka eyenziwe i-PHPMailer, ukuma phakathi kwe-oaks mossycup ngokubanzi esebenzisa i-imeyile ye-PHP ukuthumela iilayibrari, Unakho ukubeka izigidi zamasayithi Enobungozi ekumangaleleni.
Ukungapheleli kunokufunyanwe ku-Toward Ingcali yezokukhusela egama linguDawid Golunski Yintoni eyona nto yokuqalisa ukulungiselela i-PHPMailer 5 ingaba yintoni? 2. I-18, eyayibe yenziwe ngomgqibelo. Nangona kunjalo, kuvela ukuba i-patavium yayingenakwaneleyo Ukongezelela kunokuba yenzeke.
Ilayibrari ye-PHPMailer ingasetyenziselwa ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo Ngokugqithiseleyo uTom usebenzise umxholo obalulekileyo ojongene nezikhokelo zoqoqosho (i-CMS) kuquka i-WordPress, i-Joomla kunye ne-Drupal. Indawo ekufuneka ilayibrari ingabandakanywa Ngaphambili, ikhowudi yeziko labo, iya kuthathwa kufumaneke ngokumalunga nomzekeliso Imodyuli eyahlukileyo iya kuhlanganiswa kunye nezinye izongezelelo zeqela.
Ngenxa yale nto, ezo ziphoso ze-camwood ziyahlukahluka ngokuqala ngewebsite kunye newebhusayithi. Ngokomzekelo, ezo zentsebenziswano zokhuseleko lweJoomla zenze ukuba loo class Joomla JMail, exhomekeke kwi-PHPMailer, idinga ukuqinisekiswa okungekho ngaphezulu okusetyenziselwa ukuxhaphaza ukukhuseleka okungekho mthethweni.
Ukungapheleli kuya kuqaliswa Kukwa kwamkelwa kwe-imeyli yolwazi ye-imeyile kwaye kungavumela umntu ohlaselayo ukuba enze imigaqo yegobolondo enokuthi iqhutywe kwiseva yewebhu kwisimo seprojekthi ye-mail.
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kakubi kakubi kwezobhengezo kubangelwa ukuba kubonakaliswe kwiwebhu kwi-website ukuba abaqeshi i-PHPMailer bayothumela imilayezo Ivumela kwakhona ukufaka indawo ye-imeyile yomthumeli-indawo ebonakala kwi-email header. Akunakuqiqa ukuba ukulungelelaniswa okunjalo rhoqo, kwiimbonakalo ezibonakalayo zewebhu zizisa i-imeyile yomthumeli echazwe ngokufanelekileyo Ilungelo lokuvumela abaxumi kufuneka baxelele idilesi ye-imeyile yabo Ngokufanayo njengomxhamli.
"Zonke iindawo kwiJoomla API ekuthumelele iimeyile zisebenzisa idilesi yomthumeli ekusetyenzisweni kwehlabathi jikelele Ngaphezu koko, ingqalelo ingcaciso yabaklayenti kufuneka ibe khona kwenye indawo," kusho ulwalamano lwezobambiswano lweJoomla kwingxelo. "Nangona kunjalo, ukwandiswa kwepakethe Ukuhlukaniswa kwe-PHPMailer ngokungafaniyo akusebenzisi i-Joomla API ngokuthumela i-imeyli kunokufumana ithuba lokukhuseleka ukuba lo mcimbi uphumelele. ".
Abathuthukisi be-WordPress bafika kwisiphetho sokuqhathanisa, ngokuqaphela kwi-bug tracker yabo ukuba i-wp_mail yangaphakathi () isebenzise ukusetyenziswa kwekhowudi yeziko le-WordPress ayinakuchaphazelwa kuyo ayisebenzisi uphawu lwe-PHPMailer engenamandla. Ama-plug-ins angamaqela angama-3 asebenzisa i-wp_mail () ngokufanelekileyo ayifanele ukuba angathintekanga, kodwa ukuhamba kwindlela ethile iplagi-inokuthi ikhona njengangoku phantsi koviwo.
"Ukufika kwe4. 7. Ukufika kwe-1 kuza kunceda kakhulu kule micimbi, "kusho uDion Hulse ongumyili we-WordPress. "Sithunyelwe ngeelayibrari ezikhuselekileyo zokuthunyelwa kweelayibrari ye-WordPress - nakweyiphi na imeko ukuba sisebenzisa isiqhelo okanye cha. ".
Iqela lezokhuseleko likaDrupal libeka kwakhona ingxelo yezokhuseleko kule ngxaki Yintoni eyihlolisayo njengento ebalulekileyo, nangona ukuba ikhowudi yeziko laseDrupal ayiyi kuthinteka Ekugqibeleni uTom uchitha ngokungafezeki.
"Ngenxa yokugxeka okumangalisa kulo mbandela kunye nexesha malunga nokukhutshwa kwalo, sikhupha ukukhutshwa komntu ngokubanzi ngokunyamekela ukunyanzelisa abagcini be-Dropal site," ezo ntsebenziswano zathi.
Kwi-calwood yokuqaliswa kwe-calwood kufuneka ifikeleleke kwaye ikhowudi yokusetyenziswa kakubi yabantu abaninzi ingabakho, loo nto yokukhuseleka idinga isimo sosuku lwe-zero-iya kubhekiswa esidlangalaleni ize ingahanjiswa. Ukongezelela, isiphumo esiphumeleleyo esi siphumo siyahluka kwiwebsite ukuya kwiwebhusayithi, ngokuxhomekeka kwindlela i-PHPMailer isetyenziselwa ngayo, akukho ndlela elula ye-webmasters eya kunciphisa umba ngaphandle kokuvavanya.
Ukucinga ukuba ukusebenzisa i-PHPMailer ngokukhawuleza Ngaphambili, ikhowudi yabo yewebhusayithi, kufuneka bahlawule ilayibrari ye-patchcord yakutshanje iqinisekise ngokukhawuleza njengoko ikhutshwe. Bamele bakhuthaze ngakumbi kwaye bafumanisa nokuba Kuyo nayiphi na into yokuqhagamshelana ne-site yabo, impendulo, ukubhaliswa, ukubuyiswa kwe-imeyile Ngaphezu koko iintlobo ezahlukeneyo zihambisa imiyalezo yabo ncediso yenguqu ye-PHPMailer engenakukhusela.
Kusetyenziso lwenkqubo yokulawulwa kwezinto ezifunekayo ezifunekayo zize zilinganise i-website yayo yoncedo ekufumaneni ukuba ingaba yathintela njani kwikliniki yayo ngokusekwa kwayo. Emva koko kufuneka baxhamle abo bahambayo nakweyiphi na i-modg-ins-plug-ins engamanye iimodyuli ezifunekayo ezisetyenzisiweyo Nokuba zingasebenzisa i-PHPMailer ngokwabo.